FNJ Election – Page2– Media Kurakani
November 18th, 2014 Rabi Raj Baral Archives, Feature Stories No Comments
कतिपयले नेपाल पत्रकार महासंघलाई पत्रकारको छाता संगठन भन्छन्। महासंघका कार्यक्रममा हुने भाषण, पत्रपत्रिका, लेखरचना र पुस्तकहरुमा यस्तो लेखिएको/भनिएको मैले पनि देखे/सुनेको छु। तर यसो भनिको कारणचाहिँ मलाई थाहा छैन। नेपाल पत्रकार महासंघ के कारणले छाता संगठन भयो? यो विभिन्न दलनिकट पत्रकारका संस्थाभन्दा के अर्थमा फरक छ? प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी,…
May 5th, 2014 Rabi Raj Baral Archives, Feature Stories4Comments
नेपाल पत्रकार महासंघको काठमाडौंमा सम्पन्न २४ औँ महाधिवेशनमा नीतिगत सुधार, पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या र सम्भावना अनि महासंघको पुनर्संरचनाबारे बहस शून्य रह्‍यो। नयाँ नेतृत्व चयन महाधिवेशनको एकमात्र उद्देश्य र उपलब्धि बन्यो। दलीय भागबन्डा पुर्‍याउन विधान संशोधन गरियो। दलका भ्रातृ संगठनका रुपमा रहेका पत्रकार संस्थाका प्रतिनिधिले महाधिवेशनपूर्व जुटाएको संशोधन सहमतिलाई देशभरबाट चुनिएर…